သီချင်းတွေဆိုခဲ့တဲ့ Examplez ထွန်းထွန်းရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်ဇာတ်ကားလေးရဲ့ အတွေ့အကြုံ့တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှလာတဲ့ ထွန်းထွန်း - KyautthinPone
သီချင်းတွေဆိုခဲ့တဲ့ Examplez ထွန်းထွန်းရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်ဇာတ်ကားလေးရဲ့ အတွေ့အကြုံ့တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှလာတဲ့ ထွန်းထွန်း
August 16, 2020 - by W LK - LeaveaComment
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်းကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းဟာအဆိုတော်တစ်ယောက်အနေနဲ့အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါအနုပညာအလုပ်တွေကိုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာတော့ သူဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်ဇာတ်ကားလေးရဲ့ အတွေ့အကြုံ့တွေကို “လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၀၆) က ရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့ သားကောင်းမိခင်-နိုင်ငံတော်အကျိုးပြုဇာတ်လမ်း. ဒါက ကိုကိုထွန်းထွန်းရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်ဇာတ်ကားလေးပေါ့ဗျာ။
လေးလေးပန်းချီဦးစိုးမိုး, လေးလေးဦးငြိမ်းမင်း တို့လို တကယ့် Legend ကြီးတွေနဲ့ ဆုံခဲ့ ပညာတွေယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဦးလွင်မိုး ,ဦးဇင်ဝိုင်း ,မကြီးစိုးတို့လို ဝါရင့် သဘာရင့် ကြီးတွေနဲ့အတူတူ သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တယ်. သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဗကနဲ့လည်း အဲ့မှာစခင်သွားတာ အခု သားအငယ်ဆုံးက လူပျိူပေါက်ဖြစ်နေပြီ.အမှတ်တရတွေများကြီးပဲ။ အဲ့တုန်းဆို ကိုနေတိုးနဲ့ကဒါမတိုင်ခင် တကားပဲရိုက်ဖူးသေးတာ. ကိုစိုင်းနဲ့က ဇာတ်ကားရိုက် ပထမဆုံးဆုံတာပေါ့။ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း အမှတ်တရတွေနဲ့ပျော်စရာကောင်းနေရောပဲ. Pop Rap သီချင်းတွေဆိုခဲ့တဲ့ Examplez ကကောင်လေး ကနေ သဘာဝကျတဲ့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားသင်ယူခဲ့တဲ့ ကာလတွေပေါ့။ ခုထိလည်း လေ့လာသင်ယူနေရဆဲပါပဲဗျာ. Good Memories” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ပြန်လည်ဝေမျှထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်မင်းသားချော ထွန်းထွန်းကတော့ Pop Rap သီချင်းတွေဆိုခဲ့တဲ့ Examplez ကကောင်လေး ကနေ သဘာဝကျတဲ့ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားသင်ယူခဲ့ရပြီး အခုထိလည်း လေ့လာသင်ယူနေရဆဲပဲပါတဲ့။
Source: Htin Aung Tun
Previous Article ကြည့်ရှူသူတိုင်း ကြည်နှုးသွားရမယ့် အေးမြဖြူရဲ့ “နော်” ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်ရဲ့ MV
Next Article ချို့တဲ့စွာပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့လေးဘာသာဂုဏ်ထူးရှင် ညီမလေးဆီ သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ထိပ်ဆုံးနေရာက ရပ်တည်နေတဲ့ ပြင်သစ်အသင်း